Glass mgbapụta Bottle Manufacturers, Suppliers - China Glass mgbapụta Bottle Factory
12oz 350ml na-agbọ ụfụfụ ncha aka ncha karama karama maka kara aka ịsacha ahụ
Iko karama iko ndị a bụ nhọrọ zuru oke iji chekwaa mmiri mmiri ma ọ bụ ncha ụfụfụ, mmiri mmiri na ihe ndị ọzọ. Tụlee ihe nzụta buru ibu iji nwee ọnụ ahịa ọnụahịa anyị
8oz 250ml amba karama na nwa igwe anaghị agba nchara foaming pump pump
Okirikiri karama AMBER nke nwere igwe nchara nchara bụ ezigbo ihe ncha igwe ma nwee ike iji ya dị ka karama ncha ntutu, ma ọ bụ maka ihe eji eme ihe ma ọ bụ ude mmiri. A na-eji karama ndị gbara ọchịchịrị iji chekwaa mmanụ / mmanụ aromatherapy dị mkpa n'ihi na ha na-echebe mmanụ site na anyanwụ, si otú a na-enyere aka mee ka ha dị ọhụrụ karịa.
Ma ụfụfụ na mmiri mmiri dispenser dị!
355ml 12oz doro anya karama aka ncha kalama na matte nwa igwe anaghị agba nchara ụfụfụ dispenser
12oz transperent iko karama na nwa igwe anaghị agba nchara dispenser mgbapụta nwere ike mejupụta na na vasatail. Enwere ike iji ha na mmiri mmiri, ncha, ncha ma ọ bụ esi nri. Igwe anaghị agba nchara n’elu karama iko ahụ na-adịgide adịgide. Enwere ike ịsacha nchara nchara, jiri ya ma hichaa ya dịka ọ dị mkpa, ma enwere ike idowe ya maka ebumnuche niile; karama ndị a bụ nnukwu iko ma nwee ike ịsacha ya na asacha efere.
400ml iko aka ncha kalama na igwe anaghị agba nchara foaming pump disperser and silicone sleeve
Omuma ndị a karama iko Boston bụ iko zuru oke iji chekwaa mmiri mmiri ma ọ bụ ncha ụfụfụ, mmiri mmiri na ndị ọzọ. Ihe nchacha ọlaọcha agba 304 igwe anaghị agba nchara na-agba agba mgbapụta agaghị ajari. Anyị na-enyekwa nchekwa silicone na-echebe maka karama mgbapụta!
8oz amber boston gburugburu iko efere ncha karama na plastic dispenser mgbapụta
Omuma maka ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ kichin ọ bụla. Nke a 8oz amba iko kalama ncha dispenser bụ mara akpa n'ihi na gị ngwaahịa nke oke. Enwere ike ịmịpụta mgbapụta rọba ojii iji kpochapụ karama ahụ, nke na-ebelata mkpofu nkwakọ ngwaahịa ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka ịsa aka. Isi mmiri nke amba iko (ájá, soda ash na limestone) na-enweta mpaghara iji nyere aka chebe ọdịnaya sitere na ụzarị UV.
16oz doro anya boston gburugburu mgbapụta karama na plastic Liquid dispenser
Igwe karama transperent a na ihe nkesa bụ ụzọ dị mfe iji nye aka edozi. A na-ekpochapu elu nke mgbapụta ahụ, nke nwere ike jupụta karama gị na ngwaahịa ahọrọ ruo ogologo oge ma belata mkpofu nkwakọ ngwaahịa. Igwe ahụ na-enwu gbaa na-ele anya mara mma na ncha aka ma ọ bụ nke nwere agba, na-agbakwunye ọdịdị nkịtị ma dị mfe na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Omuma maka ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ kichin ọ bụla. Na nzu akara otú i nwere ike dee ojiji nzube na ya!
8oz 16oz matte nwa mmiri mmiri ncha dispenser karama
Ihe osise a na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-eji oji na-acha uhie uhie, dị maka 8oz, 16oz, 32oz na ikike ndị ọzọ. Ọ dị mma maka ncha, ncha ntutu, ihe na-ehicha ahụ, ịsa ahụ, ịka aka na ihe ndị ọzọ mmiri mmiri.
16oz 500ml ọcha na agba boston gburugburu iko mmiri mmiri ncha kalama na igwe anaghị agba nchara dispenser
Otu iko ncha dispenser kalama na dị ọcha ma dị ọcha aesthetics. Ndị a na-acha ọcha matte dispensers vittke zuru oke maka idozi na ime ka ụlọ ịsa ahụ dị mfe, wee jiri mkpuchi igwe anaghị agba nchara nwere ike ịtọpụ iji mejupụta. Anyị iko ncha dispenser karama bụ a mara mma na eke ọzọ ka plastic karama, ekwe ka ị mepụta kasị nta anya na gị dum n'ụlọ.
Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Clear Glass mgbapụta karama, Iko karama na ịgba nfuli, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu,